यी लक्षणहरू देखा परेको खण्डमा थाहा पाउन सकिन्छ कि तपाइलाई हार्ट अट्याक हुँदैछ…हेर्नुहोस् । बच्ने तरिका सहित ! – Nepal Online Khabar
यी लक्षणहरू देखा परेको खण्डमा थाहा पाउन सकिन्छ कि तपाइलाई हार्ट अट्याक हुँदैछ…हेर्नुहोस् । बच्ने तरिका सहित !
काठमाडौं : हार्ट अट्याक अहिलेको समयमा एकदम डरलाग्दो बन्दै गइरहेको छ । बिरामीको सहजै ज्यान जान सक्ने हार्ट अट्याकका बारेमा आज हामी केही महत्वपूर्ण जानकारी दिन गइरहेका छौँ । हार्ट अट्या’क त्यो अवस्था हो जहाँ तपाइँको मुटुले शरीरको अन्य भागहरूमा पर्याप्त मात्रामा रक्तसंचार गर्न छोड्छ ।
यो अवस्थाले मुटुको पम्पिङ्ग गति एकदम कम गर्दछ । जसकारण हार्ट अट्याक हुन्छ । हार्ट अट्याक हुँदा व्यक्तिको मांसपेशिहरु धेरै कडा हुन्छन् । यस समयमा उनको शरीरमा रगत प्रवाह अ’वरोध हुन्छ, यदि मुटुको पम्पले ठीकसँग काम गरिरहेको भए पनि मांसपेशिहरु अचानक कडा हुँदा हार्ट अ’ट्याक हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । हार्ट अट्याकको समयमा मुटुको दाहिने वा बायाँ तिर महसुस गर्न सकिन्छ ।
यसले एक साथ दुबै पक्षलाई असर गर्न सक्छ । जब यो समस्या एक साथ मुटुको दुबै पक्षहरूमा द्रुत गतिमा देखा पर्दछ, त्यसपछि यसको लक्षण अचानक देखा पर्छन् । प्रायः लक्षणहरु चाँडै देखा परेर बन्द हुन्छन् । यी लक्षणहरू देखा परेको खन्डमा मान्नुहोस् कि हार्ट अ’ट्याक भयोः
अचानक मुटुको धड्क’न बढ्नु, अचानक घाँटीको नसाहरु बढ्नु, लगातार खोकी लाग्नु, पेट फुलेको अवस्थामा, सास फेर्न समस्या हुँदा, खाना मन नलाग्न, धेरै थकित हुनु, खुट्टामा सुन्निने स’मस्या भएमा, पल्स दर अनियमित रहँदा, तौल मा अचानक वृद्धि, यी कारणहरुले गर्दा हुन्छ हार्ट
अ’ट्याक, यदि मुटुलाई अक्सिजन आपूर्ति गर्ने धमनी (कोरोनरी धमनी) मा कुनै अवरोध छ भने, त्यसपछि मुटुमा रगत प्रवाह ठीक तरिकाले हुँदैन । यस कारणले, मुटुले रगत पम्प गर्न सक्षम हुँदैन र हार्ट अट्याक हुन्छ ।
उच्च रक्तचाप समस्या भएका व्यक्तिहरूमा हार्ट अट्याकको सम्भावना धेरै हुन्छ । तिनीहरूको मुटुमा रगत आपूर्ति गर्न सामान्य हृदय भन्दा बढी काम गर्नुपर्दछ। जब यो अवस्था लामो समयसम्म रहन्छ, यी व्यक्तिको मुटुको मांसपेशीहरू बोसोयुक्त हुन्छन् । फलस्वरुप हार्ट अट्या’क हुन्छ ।
मायोका’र्डिटिस अवस्था हो जब भाइ’रसको कारण मुटु फुलेर आउँछ । यसको कारण, मुटुलाई पम्प गर्न गा’ह्रो हुन्छ र रगतको संचार ठीकसँग हुँदैन । त्यसको परिणा’मस्वरुप हार्ट अ’ट्याक हुन्छ ।
जो मानिस जन्मजात आफ्नो मुटुमा भल्भ लिएर आउँछ उसका लागि पनि हार्ट अट्या’क एकदम खत्त’रानाक हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुले आफ्नो हृदयको स्वस्थ भागहरु पम्प गर्न अतिरिक्त काम गर्नु पर्छ । यदि यो समस्याको समयमा नै उपचार गरिएन भने समस्या हुन्छ । यो अवस्था लामो समयसम्म रहिरह्यो भने, तब हार्ट अ’ट्याकको स्थिति सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हार्ट अट्या’कका अन्य कारणहरू
धेरै चोटि भाइरसको कारण संक्रमण, फोक्सोमा रगतको थक्के, कुनै औषधीको प्रतिक्रियाको कारण वा कुनै पनि एलर्जीको कारण पनि हार्ट अट्याक हुन सक्छ । अत्याधिक इच्छाएको कुरा अचानक पाउँदा पनि कतिपयलाई हार्ट अट्याक भएका उदाहारण रहेका छन् । यसैले आफुलाई पहिचान गर्नुहोस् हार्ट अट्या’कबाट बच्नुहोस् ।
Prevजस्तोसुकै ढाडजोर्नी लगायतका सम्पूर्ण दुखाई निको पार्ने यस्तो छ घरेलु विधि…हेर्नुहोस् । पूरा पढी सेयर गर्नुहोस् ।
Nextछालामा चमक ल्याउन देखी किड्नीको समस्या समाधान गर्छ अंगुरले, यस्ता छन् अचम्मैको फाइदाहरु…हेर्नुहोस् ।
रूकुम घ टनामा मृ त्यु हुनेका परिवारलाई जनही १० लाख राहत दिने घोषणा…हेर्नुहोस।